10ka baabuur ee ugu mushaarka badan | Shaqooyinka ugu Fiican | Talooyin Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 10 Baabuurleyda Ugu Lacagta Badan | Shaqooyinka Ugu Fiican
Waxaa jirta oraah hore oo inta badan laga dhex arko dadka reer Nigeria oo dhaheysa "na gudaha shit money dey".
Tan micnaheedu waa lacagtu waxay noogu timaadaa meelo aan la filayn.
Dad badani uma arkaan darawalnimada baabuurka inay tahay shaqo u qalanta, taas oo ka sii daran, dad badan oo doonaya inay galaan meheradda wadista baabuurta ma hayaan macluumaadka ay u baahan yihiin Sidaa darteed, dhammaan macluumaadka khaldan ee ku saabsan shaqada waxay ka yimaadaan oo keliya meel guud .
Dhanka kale, maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay gaadiidleyda ugu mushaharka badan adduunka.
Ma mudan tahay inaad noqoto darawal gaari xamuul ah?
Waa maxay sababta aad uga mid noqonayso gaadiidleyda ugu mushaarka badan?
Gaadiidleydu lacag badan ma sameeyaan ?.
Immisa ayay sameeyaan gaadiidlayda ugu mushaharka badan?
Sida loo noqdo Gaadiidleyda ugu Mushaarka Badan
1. Ururi dhammaan macluumaadka aad heli karto
2. Hubi inaad liis -hubisid shuruudaha noqoshada gaadiidleyda gobolkaaga
3. Soo hel tababar xirfadeed oo kaa caawin doona inaad istaagto
5. Dhammeystir tababarka iyo hanuuninta loo -shaqeeyahaaga
Waa maxay shaqooyinka ugu mushaarka badan gaadiidleyda?
1. Darawalka kooxda
2. Haamaha Xamuulka
3. Gaadhida warshadaha macdanta
5. Gaadiidleyda baraf wada
6. Xamzat oo dhaamin
7. jiidid culus
8. Gaadhi raaxaysi ah
9. Maraakiibta gaarka ah
10. Shaqada hawlwadeenka mulkiilaha
Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo Ee Ku Saabsan Gaadiidleyda Lacagaha Ugu Badan
Ahaanshaha darawalka xamuulka waxay noqon kartaa shaqo faa'iido leh haddii aad maskaxdaada dejiso inaad ku guulaysato.
Sida ay tani u fiican tahay, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto caqabado badan xirfaddaada darawalnimada xamuulka. Caqabadahaani ma aha kuwo aad u wanaagsan, sababtuna waa xaqiiqda ah in wadista baabuurta xamuulka loo arko inay tahay mid ka mid ah ugu khatarsan shaqooyinka Ameerika.
Laga soo bilaabo shilal, dhaawac, dhibaato iyo mararka qaarkood niyad jab, baabuur wadidku waxa uu qofka ka dareeri karaa maskax ahaan ama jir ahaan, laakiin farxadda in aad noqoto gaadiidlayda ugu mushaharka badan waxa ay tirtiri kartaa dhammaan caqabadaha aad la kulmi doonto jidka.
Waa wax lagu farxo haddii aad keligaa tahay oo aadan lahayn wax masuuliyad ah inaad yeelato xaas iyo carruur. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay nin qoys ah, tani waxay kaa kaxayn doontaa qoyskaaga inta badan. Marka, si taxaddar leh u miisaam fursadahaaga.
Dad badan ayaa darawallada baabuurta u noqda sababo badan awgood. Waxay noqon kartaa xiisaha safarka ama wadista ama labadaba. Waqtiyada kale, waxay noqon kartaa rabitaanka lacag badan.
Sabab kale ayaa noqon karta in la rabo in shaqooyinka la beddelo ama xirfadaha la beddelo.
XIDHIIDHKA: Waa imisa Qiimaha Xarunta Xogta
Sabab kasta oo uu qofku u leeyahay in uu ku dhiirado kaxaynta baabuurka waa in uu ahaadaa mid ku filan si uu u sii wado xataa marka aanay u muuqan wax fiican.
Haa, wadayaasha baabuurta xamuulka ayaa lacag badan sameeya. In kastoo, ay tahay kiis lacag badan, shaqo badan.
Gaadiidka xamuulka ah celcelis ahaan wuxuu kasbadaa qiyaastii $ 800- $ 1,000 isbuucii kadib marka la kala saaro canshuuraha. Taasi waxay u dhigantaa qiyaastii $ 38,400- $ 48,000 sanadkii.
Noqoshada Baabuurleyda Lacagta Ugu Badan Bixisa waxay ku dari kartaa hadh kasta oo midab leh noloshaada iyo xirfaddaada. Sidaa darteed, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo la xuso ka hor intaadan naftaada u gelin xirfaddan.
Makiinadaha wax raadinta ayaa ah meesha aad tagi karto si aad u hesho macluumaad ku saabsan wadista baabuurka.
Waxa kale oo aad hore u sii qaadi kartaa adiga oo la hadlaya baabuur -qaade khibrad leh oo awood u yeelan doona inuu si faahfaahsan u sharraxo isku -dhafka baabuur -wadidda iyo inuu ogaado inaad taam tahay iyo in kale.
Waxaa jira shuruudo kala duwan, gobollada qaarkood ayaa dalbanaya sida liisanka darawalnimada ganacsiga, diiwaanka wadista oo nadiif ah, iwm.
Ogow shuruudahan oo hubi inaad buuxisay.
Waxaa lagugula talinayaa inaad iska diiwaangeliso iskuulada baabuur wadista ee shuraako la ah shirkadaada riyada maxaa yeelay tani waxay ku siin doontaa faa iido fiican.
Bilow inaad codsato shaqooyin iyo sahaminta fursadaha wadista baabuurka ee ku soo gala.
Maadaama inta badan shirkadaha aysan kuu oggolaan doonin inaad jidka ku soo gasho barnaamij tababar la'aan ah, waxay caadiyan u huraan dhowr toddobaad si ay u hubiyaan in darawaladooda ay ammaan u yihiin inay baabuur kaxeeyaan oo ay hanan karaan hawsha.
Tababarkani wuxuu ku kala duwan yahay shirkad ilaa shirkad waxaana muhiim ah inaad ogaato in muddadan, dakhliga ku soo gala laga yaabo inuu aad u yar yahay ilaa marka barnaamijka la dhammeeyo.
Haddaad waxyaalahan samayso, markaa waad fiicantahay inaad tagto.
Hadda, aan u daadegno shaqooyinka ugu mushaharka badan gaadiidleyda.
Akhri: Sida Loo Bilaabo Meheradda Gawaarida Cuntada 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Wadista baabuurtu waxay kuu ogolaanaysaa fursad aad ku balaadhiso shaqadaada sidoo kalena aad hesho dakhli yar oo dheeri ah. Kuwa soo socdaa waa boosas aad u baahan tahay inaad tixgeliso si aad u ballaadhiso aragtidaada iyo Gaadiidleyda Lacag-bixinta ugu Sarreysa si gaar ah uma kala xigto.
Shakhsi ahaan, waxaan u malaynayaa in naqdinta baabuurtu ay ka walaac yar tahay noocyada kale ee kaxaynta.
XIDHIIDHKA: Musharrixiinta Bachelor-ka ma la bixiyaa? Immisa Ay Kasbadaan?
Wadista kooxdu waxay u oggolaanaysaa hal qof inuu nasto halka qof kale uu sii wado wadista saacadaha dheer, isbeddelkana wuu sii socdaa ilaa saacadda shaqada la dhammaystiro.
Shirkaduhu waxay siiyaan wadayaasha kooxda mushahar sanadle ah qiyaastii $ 54,000.
2. Xamuulka booyadaha
Qaar ka mid ah dareerayaasha markabkan booyadaha ahi waxay noqon karaan kuwo halis ah, halka kuwa kalena aanay ahayn.
Guud ahaan, qadar weyn oo dareere kasta ah way adkaan kartaa in la qaado taas oo ah sababta darawalada booyadaha ay u helaan oggolaanshaha N ama oggolaanshaha X.
Celcelis ahaan darawalka booyadaha wuxuu qaataa $ 60,000- $ 70,000 sanadkii.
Kani waa mid ka mid ah Gaadiidleyda Lacagta ugu Badan bixiya.
3. Gaadiid warshadaynta macdanta
Gawaarida miinada ayaa la ogyahay inay tahay shaqada labaad ee ugu mushaarka badan sababtoo ah khatarta ay leedahay.
Hal talaabo oo khaldan oo darawalku qaado waxay keeni kartaa burbur aad u daran taas oo ah sababta darawaladooda loo siiyo lacag intaas la eg.
Gaadiidleyda macdan qodista waxaa la siiyaa qiyaastii $ 85,000- $ 90,000 sanadkii.
In kasta oo aanay tani toos u ahayn shaqo xamuul, haddana, dad badan ayaa si dadban uga shaqayn kara warshadaha xamuulka iyagoo noqda macallin tababarka barnaamijka darawalada baabuurta.
Macalinka wuxuu kasban karaa ilaa $ 37,000 sanadkii.
5. Gaadiidleyda wadada barafka
Gawaarida xamuulka barafku waa shaqo xilliyeed laakiin aad u macaash badan waxaana loo tixgeliyaa inay ku jiraan liiska ugu sarreeya shaqooyinka/gaadiidka xamuulka ee ugu mushaharka badan adduunka.
Gaadiidleyda barafka ayaa la filayaa inay ka gudbaan waddooyinka barafka ah si ay alaab u keenaan xilliga jiilaalka. Sababtoo ah sida ay waddooyinkani u noqon karaan kuwo khatar badan marka barafku baraf yahay, noqoshada barafka waxay u baahan tahay heer xirfadeed.
Darawaladaan ayaa sanadkii qaata lacag dhan $ 120,000.
6. Xamzat soo dhaaminaysa
Kahor intaadan noqon kuwa xamuulka qaada Hamzat, waxaad u baahan doontaa inaad hesho shahaadada Hazmat maadaama ay ka khatar badan tahay noocyada kale ee baabuur -wadista.
Soo -dejinta Hamzat waxay u baahan tahay in la raro culeysyo aan degganeyn sida gaasaska, iwm hal dhibic ilaa meel kale.
Celcelis ahaan darawalka baabuurka xamuulka ee Hamzat wuxuu kasbadaa $ 70,000 sanadkii.
7. Soo jiidasho badan
Shaqadan xamuulka ah waxay kaloo u baahan tahay shahaadooyin dheeraad ah. Baabuurleyda ayaa wax ka qabta culeyska culus sida guryaha yaryar, qalabka waaweyn, iwm.
Magdhawga gaadiidleydaasi way kala duwan yihiin hal shirkad ilaa tan kale, oo ay ku jiraan saacadaha baabuur wadista, khibradaha, iyo shahaadooyinka.
Celcelis ahaan xamuulka xamuulka qaada wuxuu qaataa $ 56,000 sanadkii.
Uma baahnid inaad u baahan tahay shahaado si aad awood ugu yeelatid baabuurta raaxada laakiin waxaad u baahan tahay inaad yeelato taariikh waditaan oo nadiif ah maxaa yeelay baabuurtu waa qaali.
Baabuurleyda, hadba sida uu qaaligu u badan yahay baabuurka, ayaa lacag badan lagu bixiyaa.
Baabuurta xamuulka qaada baabuurtaan waxay kasban karaan ilaa $ 98,000- $ 100,000 sanadkii.
XIDHIIDHKA: Apps-ka ugu Fiican ee Bilaashka ah ee lagu xadidayo wakhtiga Shaashada Qalabkaaga | 2022
9. Maraakiibta gaarka loo leeyahay
Shirkadaha aan isticmaalin adeegyada maraakiibta ee ay bixiyaan shirkadaha xamuulka qaada ayaa inta badan shaqaaleeya darawaladooda si ay u daryeelaan baahidooda maraakiibta.
Sababtoo ah waxay yihiin maraakiib gaar loo leeyahay, waxay u janjeeraan inay darawaladooda siiyaan mushahar ka badan $ 86,000 sanadkii.
Akhri: Sida Loo Bilaabo Meherad Gawaarida Cuntada | Tilmaamaha ugu dambeeya ee 2022
Mulkiileyaasha iska leh badiyaa waxay leeyihiin baabuurtooda iyo qalabka kale ee lagama maarmaanka u ah dhoofinta. Qaybtani waxay u shaqaysaa si madaxbannaan ama waxay u kiraysaa shirkad kale.
Inta badan milkiileyaasha iska leh badiyaa waxay ku guul darreystaan ​​sannadka ugu horreeya ee ganacsiga laakiin mustaqbalka fog, caadi ahaan waa la bixiyaa.
$ 113,000 sanadkiiba runtii waa u qalantaa haddii aad i weydiiso.
Haddii ay dhacdo inaad su'aalo dheeraad ah qabtid, waxaan hoos ku soo ururiyey shan su'aalood oo caadi ahaan la isweydiiyo oo ku saabsan ganacsiga xamuulka.
Maxay yihiin qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee darawalka xamuulka qaada uu la kulmo ?.
- Jeega mushaarka oo dib loo dhigay.
- Mas'uuliyadda dayactirka baabuurta ee wadayaasha.
- Shilalka waddooyinka iyo dhaawacyada.
Sidee noqoshada darawal baabuurtu u saamaysaa caafimaadkaaga ?.
Fadhiga oo aad u dheer wuxuu sababi karaa inuu noqdo mid cayilan oo lagu daray dhabar xanuun.
Mudo intee leeg ayay qaadataa in la noqdo darawal baabuur?
Celcelis ahaan, waxay qaadataa ilaa 7 toddobaad si aad u hesho laysanka darawalnimada ganacsiga. Barnaamijyada tababarka ee noqoshada shaqaale waqti-buuxa ah waxay kaloo qaadan kartaa ilaa 5 toddobaad, iyadoo ku xiran shirkadda.
Waa maxay cimriga nolosha darawalka xamuulka qaada ?.
Sida laga soo xigtay CDC, celceliska rajada nolosha ee darawalka xamuulka ganacsiga waa 61 sano.
Waa maxay jadwalka jadwalka darawalka baabuurka?
Darawalka baabuurka xamuulka ah ayaa la filayaa inuu ka shaqeeyo inta u dhaxaysa 70-80 saacadood toddobaadkii iyadoo dayactirka gaadhiga, jadwalka gudbinta, tusmada xaashida, xaashida safarka, dirista, iyo liiska hubinta oo qayb ka ah jadwalka toddobaadlaha ah.
Runtii ma jirto shaqo aan lahayn kor iyo hoos toona, gaar ahaan haddii aad rabto inaad ka dhigto mid weyn, warshadaha xamuulkana ay ka mid yihiin.
Diirad saaridda qaybta xiisaha leh ee shaqada ayaa hubaal ah inay ku sii wadi doonto oo aad ugu dhakhsaha badan, magacaagu wuxuu ku soo bixi doonaa liiska baabuurleyda ugu mushaharka badan adduunka.
Sida Loo Bilaabo Meherad Gawaarida Cuntada | Tilmaamaha ugu dambeeya ee 2022
Dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka ee Cigna 2022: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Sharci Ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
15 -ka Madal ee Blogging -ka ugu sarreeya Bilaash 2022
Markaad raadineyso aagagga ugu wanaagsan ee wax lagu qoro oo bilaash ah, natiijooyinkaagu waxay inta badan ku xirnaan doonaan baahiyahaaga qorista, iyo…
Waa maxay Saqafka Deynta? Dulmar iyo sida ay u shaqeyso
Doodda saqafka deynta ayaa ah mid aan dhammaanayn oo ka mid ah dhaqaalaha iyo siyaasiyiinta, iyo cidda eedayn karta. The…
15ka Dariiqo Ee Ugu Sareeya Dadka Danyarta Ah Waxay Isku Dayaan Inay U Muuqdaan Qani
Haddii aad u malaynayso dadka saboolka ah inay yihiin kuwa xidha dhar jajaban ama ku nool dunidu, markaas…